Kitra – «THB ligue des champions 2016» : tsy mbola resy hatreto ny Som Fosa sy Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – «THB ligue des champions 2016» : tsy mbola resy hatreto ny Som Fosa sy Cnaps Sport
Niditra tamin’ny andro fahatelo ny fifanintsanana isam-bondrona, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions 2016”, taranja baolina kitra. Ekipa roa no miavaka amin’ny vokatra hatreto.
Ny Cnaps Sport avy any Itasy, ho an’ny sokajy milalao any Fianarantsoa sy ny Som Fosa Junior-n’i Boeny, mifaninana any Mahajanga. Ireo no misongadina amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “THB ligue des champions 2016”, eo amin’ny baolina kitra.
Nandresy hatrany mantsy ireo ekipa roa tonta ireo, tamin’ny lalao telo nataony, ary mitarika vonjimaika amin’ny filaharana. Teo amin’ny andro fahatelo notanterahina, omaly mbola nomontsanin’ny Cnaps Sport, tamin’ny isa 4 noho 0 ny DCF Fort-Dauphin. Tsy niady mihitsy ny lalaon’ny roa tonta raha ny fizotran’ny fihaonana satria tena nanantombo teo amin’ny fahaizana na ara-taktika na ara-teknika ny ekipan’Itasy. Vao nanomboka 1 mn ny fihaonana dia efa nahakobana ny harato i Niasexe. Mbola nampian’i Kassimo indray izany, teo amin’ny minitra faha-30. Tsy nijanona teo fa nahafaty baolina faharoa ho azy i Niasexe, minitra faha-65 ary nofaranan’i Rado, tany amin’ny faha-74 nilalaovana.
Manohy ny fahombiazany ihany koa ny Som Fosa Junior, rehefa nandavo ny RTS Jet Mada, tamin’ny isa mazava 2 noho 0. Sydo (60 mn) sy Rinho (70 mn), nahatafiditra ireo baolina roa nahazoan’ny Som Fosa ny fandresena.
Ankoatra izay, resin’ny Zanak’Ala FC, tamin’ny isa tokana 1 noho 0 ny FC Vakinankaratra. Tamin’ny isa mavesatra 6 noho 0 kosa ny nandavoan’ny Elgeco Plus ny FC Fitama. Ajesaia nanilika ny FC Joel, tamin’ny isa 3 noho 0 ary 2 noho 1, nandresen’ny Tana Formation ny AS Comato.